ဘယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကဘယ်တက္ကသိုလ်တွေလဲ။ - သတင်း
ငါအောက်စ်ဖို့ကိုသွား = ငါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပါပဲ, ငါမသာငါ, မာနထောင်လွှားဘူး။
ပြည်သူလူထုကသူတို့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကိုမကျေနပ်ကြပါ။ ဒါဟာ Durham, ဒါမှမဟုတ်ဆုဖလားအာဆင်နယ်မှာရယ်မောဖို့လွယ်ကူပါတယ် - ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးမှာရယ်မောရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်လော
ငါ CS Lewis၊ ငါ Cantona ပေါ့၊ Tolkien၊ ဖာဂူဆန်၊ Ghandi, အကောင်းဆုံး၊ တိုနီဘလဲ၊ ဂျမ်ဘာ - ဂျမ်ဘာ ဘာစာရင်းလဲ
Oooooh, သင်ဒိုင်လူကြီးများနှင့်အက်ဖ်အေမှ ဦး စားပေးကုသမှုကိုရ! မင်းပြောတာကိုငါကြားတယ် Ooooh မမျှတဘူး
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ကျွန်ုပ် ၀ တ်စားဆင်ယင်ထားတဲ့ဒီဝတ်ရုံတွေအောက်မှာမင်းကိုမကြားရဘူး၊
ကင်းဘရစ် - လီဗာပူးလ်
ငါ Cambridge သို့သွား = ငါလီဗာပူးလ်ပါပဲ။
Oxford နှင့် Cambridge သည်နှစ်စဉ် Boat Race ပြိုင်ပွဲအတွက်ထူးခြားသောအရည်အချင်းများရှိသကဲ့သို့ယူနိုက်တက်နှင့်လီဗာပူးလ်အသင်းတို့သည်အမြဲတမ်းရှိနေသည် သော အများဆုံးအခြားလ်တာထက်နည်းနည်းပိုကြီး။
Oxford Varsity ရပ်ဘီဘောလုံးရပ်တည်မှုအပြီးတွင် Clapham Grand ရှိအဖြူအခွင့်ထူးသည် Moet ကိုသွန်းလောင်းပြီးသူတို့၏ဆံပင်ကိုလှန်လှောလိုက်သည်နှင့်ဆင်တူသည် Moss Side ရှိရုန်းရင်းဆန်ခတ်များမြို့တော်သို့ရောက်သောအခါငါဆင်တူသည်။
ငါ့မှာနာမည်ကြီးကျောင်းသားဟောင်းတွေလည်းရှိတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံတော်တော်လေးကြည့်ပြီးစားပွဲပေါ်မှာထိပ်ဆုံးရောက်နေတယ်ဆိုတာလူသိများတယ် တစ်ခါတစ်လေ , ငါအစဉ်အမြဲဒီပယ်အသက်ရှင်ရန်သွားတာပါ။
Oxford Brookes - မန်ချက်စတာစီးတီး
ငါ Brookes = ငါစီးတီး, လမ်းကိုဆင်းတွေအများကြီးဆူညံအိမ်နီးချင်းကိုသွား။
ငါတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုအနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပိုစတာတွေကိုငါအဖြူ၊ အများပိုင်ကျောင်း MC ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးည Fuzzy Duck (ဥရောပမှာဆွဲဆောင်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနေရာ) မှာအောက်စဖို့ဆန့်ကျင်ဓမ္မသီချင်းများကို ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်။
အောက်စ်ဖို့ကိုချွတ် Fuck! အောက်စ်ဖို့ကိုချွတ် Fuck! ကျနော်တို့ရွတ်ဆိုပေမယ့်ရီးရဲလ်အောက်စ်ဖို့ဒ် (RO) ကျောင်းသားတွေကမကြားရဘူး၊
စောင့်ပါ RO ကမြက်ပင်သည်လမ်းပေါ်တွင်စိမ်းလန်းစိုပြည်နေသည်ဟုသံသယရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။ တ ဦး တည်းအဘို့, ငါတို့ Brookes ကျောင်းသားများကို RO အတွက်ထက်ပိုမိုကြည့်ရှုခြင်း, အလုပ်နှင့်ပါတီပွဲလျော့နည်းပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။
အလားတူစွာပဲဖာနန်ဒင်၊ Yaya Toure နှင့်ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗားတို့ဟာ Tom Cleverley ထက်နည်းနည်းပိုကောင်းလိမ့်မည်ဟုသံသယရှိစရာဘယ်သူမှရှိပါသလား။
New College of Humanities - ချယ်လ်ဆီး
ငါ NCH ကိုသွား - ငါဖြစ်၏တစ် cuntလန်ဒန်၏ nouveau ကြွယ်ဝမှု, ကျော်ကြား CFC ။
NCH ​​သည်တစ်နှစ်လျှင်ပေါင် ၁၈,၀၀၀ ဖြင့်ကျူရှင်တက်ရန်ကမ်းလှမ်းသောပုဂ္ဂလိကကောလိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ NCH ​​အသင်း ၀ င်သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအစွမ်းအစရှိသကဲ့သို့ချယ်လ်ဆီးပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်မှာသင်ပုံမှန်အားဖြင့်အဆီဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဂျူးဆန့်ကျင်ရေး သို့မဟုတ်အီတန်သို့သွားခဲ့လျှင် - သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်လျှင်သုံး ဦး စလုံး။
ကောလိပ်ကိုတည်ထောင်သူနှင့်နေထိုင်သူဘုရားဖြစ်သူအေ။ အေ။ ဂရင်းလန်းနှင့်အတူသင်ခန်းစာယူပါ၊ သို့မဟုတ်သင်၏အဖွဲ့အစည်းကိုအပတ်တိုင်းကပ္ပတိန်၊ ခေါင်းဆောင်၊ ဒဏ္,ာရီ၊
AC Grayling သည်သူမကိုယ်သူမလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်
ငါ Bristol ကိုသွားပါ။ အာဆင်နယ်ပါ။ သူဟာဘယ်လောက်ဂုဏ်ကျက်သရေရှိတယ်၊ fuck ဆိုတဲ့လူတိုင်းငါ့ကိုအနားကွပ်
အဓိကပို့ကုန်များအိမ်တွင်းဂီတ၊ High Renaissance Man နှင့်ဆေးလုံးများဖြစ်သောတက္ကသိုလ်မြို့ကြီးအဖြစ်လူတိုင်းသည် Bristol ၏လုံလောက်မှုကိုမရနိုင်ပါ။ အာဆင်နယ်နဲ။
စတိဗ် Bould, backroom န်ထမ်း
Mikel Arteta သည်ဘောလုံးကိုတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့မိနစ် ၉၀ အတွင်းပြန် ကန်၍ သူ၏အလယ်ဗဟိုသို့မည်မျှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ကို Oooooh ကြည့်ပါ။ ငါ့ကိုမင်းရဲ့အလင်းရောင်နဲ့အတူဝင်ခွင့်ပေးပါ
နောက်ဆုံးဆုဖလားကိုသင်ရရှိသည့်အခါ Miley Cyrus သည် ၁၂ နှစ်အရွယ်ဖြစ်သည်။ သငျသညျ Oxbridge fuck ဆိုတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
Durham - စပါး
ငါ Doxbridge ကိုသွားတယ်
သင်ရုံစောင့်ကြည့်။ Kyle Naughton နှင့် Nacer Chadli တို့၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းက၎င်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်တကယ့်အရာကမဟုတ်ပါဘူး? သင်ရုံကြီးတွေယောက်ျားလေးများတစ် ဦး ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။
၂၂ နှစ်အတွင်းထူးချွန်မှုမရှိခြင်း (အတန်းထဲတွင်ရှုံးနိမ့်သူအားပေးသောတိုးတက်မှုအရှိဆုံးဆုနှင့်ညီမျှသော) အတွက်တန်ဖိုးရှိသည့်ဖလားနှစ်မျိုး၊ Capital One ဖလား / Oxfam ဖလားနှစ်ခုသည်အရာရာကိုအနိုင်ယူသည်မဟုတ်လော။
မင်းပျော်တယ်လို့မင်းပြောနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့အားလုံးအတူတူပဲစဉ်းစားနေကြတယ်။ အင်တာဗျူးကသိပ်မကောင်းဘူးလား။
လိဒ် - ဆွမ်ဆီး
ငါလီဗာကိုသွား - ငါဆွမ်ဆီးဖြစ်ကြောင်းကို, ငါ likeable မိပါတယ်ပေမယ့်လည်းအခြားသူများမှအားလုံးပညာရှင်များနှင့်ဆုဖလားစွန့်ခွာဖို့အတော်လေးပျော်ရွှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့အကြောင်းကိုပြောမကောင်းတဲ့စကားလုံးမရှိ။ ကိုယ့်အကြီးအအချိန်ရှိခြင်းတာပါ။
ပိုဆိုးတာက 'Uni Unay!' သို့မဟုတ် 'Swanselona? ငါသည်သင်တို့ကိုပျော်စရာရှိခြင်းကိုသိပေမယ့်ကျေးဇူးပြုပြီး။ စိတ်အေးအေးထားပါ၊
လိဒ် Met - ကာဒစ်
ငါ Leeds Met, posh Leeds, '' ပျော့တောင်ပိုင်း shite ဏအပြည့်အဝနံရံများရိုက်နှက် fukin - ငါ Cardiff ကိုသွားပါ။ ငါ Swansea ပန်ကာကိုမြင်လျှင်ငါမျက်နှာန်းကျင်ကသူ့ကိုမှမှန်ကန်သောကောင်းသော clackering ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါချင်ပါတယ်။
Warwick - Aston ဗီလာ
ငါ Warwick ကိုသွား = ငါ Aston ဗီလာပါပဲ။
အိုကေဒါဒီလူတွေအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်။ Warwick ရဲတိုက်သည်လှပတင့်တယ်ပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်ဘောလုံးတီထွင်ခဲ့စဉ်ကတည်းကဗီလာသည်ဘယ်သောအခါမှမတက်ခဲ့ပါ။
သင်တို့မူကားနောက်ဆုံးမှာ Birmingham / Midlands, ဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာရှိနေတယ် (ငါ '' သုတေသန '' ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မြေပုံတစ်ခုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုရင်သင်အရမ်းမှားနေတယ်) ။
ကျောင်းသားများ Coventry သို့မဟုတ် Leamington ထွက်ရန်ရှိသည်နှင့်ဤအပေါ်အပြုသဘောလှည့်ဖျားထားရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။
Gabriel Agbonlahor နှင့်အတူ Wolverhampton Walkabout တွင်တစ်ညအပြုသဘောလှည့်ဖျားထားရန်လည်းခဲယဉ်းသည်။
အီဒင်ဘာ့ဂ် - Fulham
ငါ Edinburgh ကိုသွားပါ = ငါ Fulham ပေါ့ - တော်တော်လေးလမ်းလျှောက်အများကြီးနှင့်ပိုက်ဆံဟောင်းများအများကြီးနှင့်အတူ likeable, inoffensive ။ မင်းငါ့ကိုဘယ်လိုမုန်းနိုင်မလဲ
ငါ Exeter = ငါ Hull City, သေးငယ်တဲ့နှင့်ဘယ်နေရာမှာ fuck ဆိုတဲ့၏အလယ်၌တည်၏သွားပါ။
အခြား Russell အုပ်စုများကဲ့သို့ကျန်းမာသောရှုပ်ထွေးသောဆက်နွယ်မှုရှိသည့်ဤကျောင်းသားများသည်အိပ်ရာမင်းသမီးလေးများကိုလည်ပတ်နေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ငါနှင့် Hull's kit ၏လိမ္မော်ရောင်နှင့်သူတို့၏ All-time club သူရဲကောင်းတို့၏လိမ္မော်ရောင်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ရလိမ့်မည်။ ) ။
ထို့အပြင် Exeter သည် Elina Desaine နေထိုင်ရာနေရာဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကယူကေနိုင်ငံ၏အအောင်မြင်ဆုံးကျောင်းသားကိုမဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Hull City ၏ Tom Huddlestone နှင့်ပတ်သက်သောဇာတ်လမ်းများသည် g အတွက်ဘာမှမပါ။ - [Tab ရှေ့နေများကဖြတ်!]
လန်ဒန်စီးပွားရေးကျောင်း - West Ham
အိုကေ၊ ဒါကြောင့်သူတို့နှစ် ဦး စလုံးဟာလန်ဒန်မှာရှိနေပြီးဂုဏ်သိက္ခာလည်းကျပါတယ် (West Ham လုပ်ခဲ့တယ်) ကမ္ဘာ့ဖလားအနိုင်ရ နောက်ဆုံးတော့)။
ကျောင်းသား raves နှင့်အတူပြည့်နှက် LSE
ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှတကယ်အဲဒီကိုသွားချင်ကြတယ်။ LSE အဆောက်အ ဦး တွေကိုမြင်ဖူးလား။ သူတို့ဟာ Gringott နဲ့တူပြီး Delaunay နှင့်တော် ၀ င်တရားရေးတရားရုံးများအကြားတံတွေးထွေးနေကြသည်။ Uni Unay ၏ပါတီကမ္ဘာ။
notre Dame တစ် Ivy လိဂ်ဖြစ်ပါတယ်
West Ham တွင်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။ သင်ကအားကစားကွင်းတွင်ရှိနေသည်ဟုခံစားရပေမည်၊ သို့သော်ဘော်လ်တန်ပုပ်လူများမှမိနစ် ၉၀ ကြာအများအားဖြင့်အဆီများကိုကြည့်ခြင်းသည်အချို့သော 'အားကစား' ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အားနည်းချက်ဖြစ်သည်။
ဘုရင်မမာရိ - Crystal နန်းတော်
ပရီးမီးယားလိဂ် / ရပ်စယ်လ်အုပ်စုဘယ်လိုနေလဲ။ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး မူရင်းအုပ်စုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သောအခါစည်းမျဉ်းချမှတ်သူတစ် ဦး သည်ရေချိုးဆားတွင်ရှင်းနေသည်။
တစ် ဦး ကပရီးမီးယားလိဂ်ကစားသမားပုံ
Loughborough - စတုတ်စီးတီး
ငါ့ကိုဒီတစ်ခုပေါ်မှာနားထောင်ပါ။ Loughborough ဟာအားကစားမှာကောင်းတယ်၊ Stoke လည်းမဟုတ်ဘူး။
ကြောင်းအားကစားမဟုတ်လျှင်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုအနေဖြင့် Neanderthals ၏အလေ့အကျင့်တစ်ခုချင်းစီကိုအချင်းချင်းမြေပြင်မှနပန်း။ ထောင့်မှာ။
ဟုတ်ကဲ့ Loughborough ကသင့်အား Stoke ကဲ့သို့သောဘွဲ့တစ်ခုပေးသည်။ သို့သော်သင် Loughborough ကျောင်းသားကိုတွေ့ဖူးပါသလော။ သူတို့ကတစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားမျိုးစိတ်ကဲ့သို့ပါပဲ။ သူတို့သီချင်းဆိုတဲ့အခါ Ryan Shawcross နဲ့ Robert Huth တို့နည်းနည်းတော့တူတယ်။
ဒါကဖြစ်လောက်အောင်နှိုင်းယှဉ်၏အလုံအလောက်သရဖူ-ing အတွက်ဖြစ်ကောင်း, ငါအလုံအလောက်လူတွေရဲ့တက္ကသိုလ်များ / ကလပ်စော်ကားပါတယ်။
ဒီမှာငါ့ twitter ပါ - fuck ဆိုတဲ့ငါ့ကိုလာ။